भर्खरै सकिएको कक्षा १२ को नतिजा कहिले आउँछ ? आयो यस्तो खबर – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/भर्खरै सकिएको कक्षा १२ को नतिजा कहिले आउँछ ? आयो यस्तो खबर
एक साताभित्र परीक्षण**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण स्थगित गरिएको कक्षा १२ को परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् । मङ्सिर ९ गते सुरु भएको कक्षा १२ का विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा मङ्गलबार सकिएको हो । परीक्षामा चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भौतिक रूपमै परीक्षामा सहभागी भई परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्नभयो । यसपटक बोर्डले परीक्षा सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा पहिले मात्रै सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रमा प्रश्न पत्र पठाउने प्रावधान यस पटकबाट सुरु गरेको छ । परीक्षामा यस खालको अभ्यास पहिलो पटक गरिएको हो । विद्यार्थीले यस पटक डेढ घण्टा मात्रै परीक्षामा सहभागी भए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।